सिरहामा १५ प्रतिशत बालबालिकालाई कुपोषण – ejhajhalko.com
२३ पुष २०७४, आईतवार ०८:०२ 263 पटक हेरिएको
सिरहा । बालबालिकाहरुमा देखिएको कुपोषण हटाउन सिरहामा शिघ्र कुपोषण एकिकृत व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएको छ ।
गएको भदौ महिनामा तराई मधेशमा आएको बाढीको चपेटामा परेका बालबालिकाहरुको दृष्टिगत गर्दै सिरहामा कुपोषण हटाउन शिघ्र कुपोषण एकीकृत व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय सिरहाका प्रमुख डा. चुमनलाल दासले बताए ।
बाढीका कारण पोषणमा परेका असरलाई सम्हाल्नका लागि कार्यक्रम संचालन गरिएको उनले बताए । उनले भने “सानो बच्चा भएका दुध चुसाउने आमा र बच्चाहरुमा बाढीका कारण पोषणमा असर परेकोले “न्युट्रिसियन इन ईमरजेन्सि” भन्ने कार्यक्रम ल्याईएको छ ।
मिर्चैयामा संचालित सिध्र कुपोषण एकिकृत ब्यबस्थापन कार्यक्रम सम्बन्धि स्वास्थ्यकर्मीहरुको प्रशिक्षणको क्रममा प्रमख डा. दासले सिरहामा गरिएको “क्विक एसिस्टेन्ट” अध्ययन अनुसार १५ प्रतिशत बालबालिका कडा कुपोषणको चपेटामा रहेको बताए ।
उनले भने, “अहिले जिल्ला भित्रको अवस्था हेर्दा कडा खालको कुपोषित बालबालिका १५ प्रतिशत रहेको छ, जबकी देशभरीमा १० प्रतिशत र प्रदेश नम्बर २ मा १४.४ प्रतिशत बालबालिकाहरु कडा कुपोषणको मारमा रहेका छन् ।”
“गर्भवती महिलामा पोषणयुक्त खानाको अभाव, कामको अत्यधिक बोझ, आरामको अभाव र पारिवारिक बेवास्ताका कारण बालबालिकामा कुपोषणको अवस्था पनि भयावह देखिएको छ ।”
कार्यक्रम अन्तर्गत जिल्लाका बिभिन्न स्थानमा सर्वोतम पिठो बाड्एिको छ भने कतिपय स्थानहरुमा बाड्ने क्रम जारी रहेको उनले बताए ।
त्यस्तै, आमाहरुलाई तयारी खाना बितरण गर्ने, बच्चाहरुको पाखुराको नाप र वजन लिने काम भइरहेको समेत उनले बताए ।
ढिलै भएपनि सिरहा जिल्लाको लागि यो धेरै राम्रो कार्यक्रम रहेको कार्यक्रमका प्रशिक्षक रामानन्द पंडितले बताए । उनले भने “यस्तो कार्यक्रम हुनै पर्ने हो, सिरहा जिल्लामा धेरै बच्चाहरु कुपोषित भएका छन्, बच्चाहरुलाई कुपोषित हुन नदिनका लागि स्वास्थ्य कार्याकर्ताहरुको माध्यमबाट सहजिकरण गर्नुपर्छ ।” यो समस्या खासगरि गरिबी र अशिक्षाका कारण भएकोले बुझाउन सके सजिलै संग कम गर्न सक्ने प्रशिक्षक पंडितले दाबी गरे ।
युनिसेफ र डब्ल्युएफपीको आर्थिक सहयोग, युके एड, रिपब्लिक फ्रान्सिस, ग्लोबल हेल्थ एलाईन्स नेपाल, नेपाल पब्लिक हेल्थ फाउन्डेसन, अस्ट्रेलियन एडको समन्वय र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय सिरहाको संयोजनमा कार्यक्रम संचालित रहेको प्रमुख डा. दासले बताए ।